Ireo Vaovaon’ny Tontolom-bolongana Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2017 12:39 GMT
(Fanamarihana: nivoaka tamin'ny Jolay 2005 ity lahatsoratra ity, teny Shinoa ny sasany amin'ny rohy ato anaty lahatsoratra)
Taorian'ny nangatahan'ny Tencent an'ireo vondrona mpampiasa ny QQ ai aminy mba handrakitra ny tena anarany, asehon'ny fitsapan-kevitra iray fa efa ho ny antsasak'ireo olona no mety handao ny fampiasana io rindrambaiko malaza fandefasana hafatra io. 65% amin'izy ireo no manohitra ny politika antsoina hoe “fandraketana ny tena anarana” raha ampiharin'ny governemanta amin'ny ankapobeny
Tantara iray hafa mahaliana mikasika ny fandraketana ny tena anarana. Olom-pirenena iray antsoina hoe Zhen Tao Lee izay voalaza ho mpiaro an'ilay politika no nandefa ny tena anarany sy ny ID, nomerao famantarana azy manokana, tamin'ny iray amin'ireo BBS lehibe. Saingy maro kosa ireo mpampiasa hafa no nikaroka ilay nomerao tao amin'ny Google ary nahita fa sandoka io ID io teo amin'ny vohikala ofisialin'ny governemanta. Rehefa nanaovan-dry zareo fanamby ny maha-azo itokiana azy dia hitan'izy ireo fa nandritra ny alina dia novain'ny “mpampiasa” ny sary mombamomba azy. Noheverin'ny maro fa tetika efa nomanin'ny sampana fanarahamaso ny aterineto izany.
Tamin'ity herinandro ity, natao tao Beijing ny fivorian'ny antoko enina niezahana hikatsahana vahaolana momba ireo krizy nokleary ao Korea Avaratra. Nanaraka akaiky ny tantara ireo vondrom-piarahamonina Shinoa ety anaty tambajotra.
Mpandray fitenena omem-boninahitra manokana i Bill Clinton ao amin'ny Fihaonambe 2005 Mikasika ny Aterineto atao ao Shina, ao West Lake, voalahatra ho ny 10 Septambra 2005, karakarain'ny Alibada.com, orinasa malaza iray mpanao varotra anaty aterineto. Mampnahy ny vahoaka ny amin'ny hitondràny ny tena vahaolana.
Natao tamin'ny Jona, Shinoa iray bilaogera no toa nahatsikaritra ny lisitra mikasika ireo teny voaràra tao amin'ny Blogcn.com, ilay faharoa goavana indrindra amin'ireo mpanome tolotra Biloagy. Ahitana ny ankamaroan'ny anaran'ireo mpitondra marobe ilay lisitra, ireo mpanohitra ary ireo trangan-javatra ara-tantara mahabe adihevitra. Nampiasainy ny ADblock plugin teo amin'ny FireFox mba ahitana ny “Teny Ratsy”.
Bokee, fantatra fahiny tamin'ny anarana hoe Blogchina, no nanambara ny fiarahamiasany amin'ny Feedburner. Hovatsian'ny Feedburner amin'ilay fitantanana RSS mitàna ny laharana voalohany ny Bokee .
Niantso ny tontolom-bolongana eo an-toerana ireo blaogera ao TaiWan mba hiray hina hanohitra ny tantara ratsin'ny kolikoly amin'ny baseball, idiran'ny resaka filokàna sy fifehezana ny lalao amin'ny alàlan'ny hetsika ankiafinafina.
Douglas Kellner, blaogera malaza av yamin'ny elatra havanana no tonga tao TaiWan mba hivory. Nanaiky ny tafatafa tamin'ireo blaogera tao TaiWan izy, niresaka mikasika ireo andraikitry ny media.